Waa Mar Kale Waqti Fasax ah, Waa Kuwan 10 Xeelado Lagu Kordhiyo Natiijooyinkaaga
Arbacada, Oktoobar 11, 2017 Arbacada, Oktoobar 11, 2017 Douglas Karr
Waxaan fadhiyaa dukaan yar oo kuyaala garoonka diyaaradaha ee Minneapolis anigoo kusii jeeda gurigeygii Indianapolis. Waxaan hadda dhammeeyey muhiimada aan ka helayo ConceptOne oo faahfaahin ka bixisay Safarka Agile Suuqgeynta isla markaana siisay ka soo qeyb galayaasha xaashidayda 'Initiative Initiative'. Nuqul ka mid ah taas markaad aqrinaysid sawirradan - waa inay kaa caawisaa inaad dibadda u baxdo! Ku noqo sheekada. Waxaan joogay Austin oo ku taal Dell usbuucii la soo dhaafay oo aan u soo bandhigayay kooxdooda caalamiga ah oo ku saabsan podcasting, guriga ayaan helay, waana u tagay
Meel ka mid ah tikniyoolajiyada suuq-geynta, waxaa jiray koboc balaaran oo ay lajirtay Software-ka Adeeg ahaan iyo awood u lahaanshaha iibsashada wixii aad ugu baahnayd sanduuqa. Waqti ka dib, SaaS waxay ka gudubtay kharashka dhismaha iyo shirkado badan oo SaaS ah ayaa ka baxay markii ay ku guuleysteen dhismaha ka soo horjeedka iibsiga miisaaniyadda. Sannado ka dib, iyo suuqleydu waxay isku helayaan meel kale oo isgoys ah. Xaqiiqdu waxay tahay in dhismaha uu sii wado hoos u dhaca qiimaha. Waxaa jira dhowr sababood oo ah sababta
Waa maxay sababta Magento u sii wado hogaaminta Ecommerce CMS Industry
Sabtida, Janaayo 17, 2015 Axad, Janaayo 18, 2015 Douglas Karr
Goobaha Ecommerce waxay ahaan jireen maalgashi aad iyo aad waxaana looga baahnaa maalgashi oo kaliya shirkadaha ganacsiga awood u leh inay awoodaan. Maaddaama ay sii kordhayaan macaamiisha wax ku iibsadaan khadka tooska ah, tafaariiqleyda ayaa sii wadaya inay arkaan hoos u dhaca ku yimid booqashooyinka dukaanka - marka waxaa lagama maarmaan noqotay inay dhisaan joogitaankooda e-commerce oo ay isku dayaan inay dib ula wareegaan saamiga suuqa. In kasta oo ay jiraan barxado waaweyn oo halkaa yaal oo isku daraya martigelinta, fududaanta isticmaalka, adeegga iyo xitaa barta nidaamyada iibka… badankoodna kuwa sarreeya